Vaovao - Inona no fanantenana amin'ny gorodona plastika vao misondrotra?
Inona no fanantenana amin'ny gorodona plastika vao misondrotra?
Ny gorodona vita amin'ny plastika PVC noho ny fampiasany fitaovana dia azo havaozina amina tontolo iainana PVC, mifanaraka amin'ny fironana momba ny tontolo iainana ankehitriny, dia azo lazaina ho indostrian'ny fiposahan'ny masoandro. Manantena ny ho avy, ny gorodona plastika PVC dia hanana habaka fampandrosoana lehibe kokoa. Ny gorodona vita amin'ny plastika PVC dia ho olona kely sy tsara ihany koa hampiasana ny gorodona miasa mankany amin'ny gorodona iraisana, ity mpanoratra manaraka ity dia hiresaka fohy momba ny indostrian'ny plastika PVC amin'ny ho avy amin'ny firoboroboan'ny tsena any Shina
01 ny hafainganam-pandehan'ny fampandrosoana nohafainganina
Ny vidin'ny asa ambany sy ny vidin'ny akora any Shina dia nametraka fototra mafy orina ho an'ireo orinasa an-trano hamokatra gorodona plastika PVC. Ny tsena midadasika sy ny fitomboan'ny fangatahana haingana dia misarika orinasa marobe hiditra amin'ny sehatry ny gorodona plastika PVC. Antenaina fa ao anatin'ny taona vitsivitsy, ny tahan'ny fitomboan'ny famokarana sy ny varotra plastika PVC dia hihoatra ny fitaovana hafa rehetra, ary ho lasa iray amin'ireo toekarena mampivoatra haingana indrindra.
02 isan-karazany ny fampiharana
Ho fanampin'ny toerana ho an'ny besinimaro, ny gorodona plastika PVC dia maivana ho azy, tsy mahazaka lelafo, tsy misy hamandoana, miady amin'ny skid ary toetra hafa, ary mahatonga azy io ho fitaovana haingo malaza indrindra amin'ny ho avy. Ankoatry ny fampiasan'ny besinimaro amin'ny toerana ampahibemaso, hiditra amin'ny tsenambarotra haingon-trano amin'ny faritra midadasika ihany koa izy, ary hihalalaka kokoa ny fampiharana azy.
Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana 03 fanampiny
Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany sy ny fanatsarana ny teknolojia ary ny teknolojia fanodinana, ny gorodona plastika PVC dia ho lasa fiarovana bebe kokoa ny tontolo iainana sy ny fahasalamana, hihatsara sy azo hatsaraina ny fiarovana, ho avo kokoa ny fahombiazan'ny fampiasana loharanom-pahalalana, ary ny gorodona plastika PVC no ho lasa fanodinana malaza be kalitao indrindra. fitaovana haingon-trano.
04 ny fepetra takiana amin'ny teknolojia fametrahana dia avo sy avo kokoa
Ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny fitaovana haingon-trano sy ny fikatsahana vokatra haingon-trano dia hanova be ny fomba fametrahana tsotra ny gorodona plastika PVC efa misy. Mba hampisehoana tsara kokoa ny valin'ny haingon-tarehy feno gorodona vita amin'ny plastika PVC, ny haavon'ny teknikan'ny orinasan'ny fametrahana sy ny mpiasa dia ho avo kokoa sy avo kokoa, izay hampiroborobo ny haitao fananganana PVC gorodona vita amin'ny plastika matotra kokoa sy manara-penitra kokoa ny orinasa.
05 ny fizarana asa an-trano dia miharihary hatrany
Mitovy amin'ny fizotran'ny fampandrosoana ny gorodona plastika PVC an-trano tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny marika nafarana dia manana varotra sy fametrahana rafitra somary fenitra sy voarindra ary mazava tsara ny fizarazaran'izy ireo. Ireo mpamatsy akora dia tena mahazatra ny fitaovana sy ny fahombiazany, ka izy ireo no mpikarakara fananganana tsara indrindra, ary nanjary iray amin'ireo toetra mampiavaka ny indostrian'ny gorodona plastika PVC an-trano. Ao anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa famokarana gorodona plastika an-trano dia hitovy. Tsy izy ireo ihany no mpamatsy ny gorodona plastika PVC, fa koa mpanohana tsara indrindra amin'ny fananganana plastika PVC.
06 nohamafisina ny fifantohana indostrialy
Na dia mbola tsy novolavolaina nandritra ny fotoana ela tany Sina aza ny gorodona plastika PVC, dia miharihary ny toetrany isam-paritra ary mifantoka ihany ny indostria. Toerana indostrialy maro no natsangana tany Hebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai ary Guangzhou. Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny ambaratongam-pamokaran'ny orinasan-marika eto an-toerana dia hohamafisina bebe kokoa ny fifantohana indostrialy ary hihamatanjaka hatrany ny ampihimamba ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa sy ny fampifangaroana eo amin'ny indostria.
Floor, Pvc Sponjy Flooring, Floor Carpet Roll, Nahatsapa ny Flooring Flooring ny biby, Karipetra Pvc, Flooring Sponjy amin'ny biby,